ခု …. ကျွန်တော် ပြောချင်တာလေးကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ကွန်ပျူတာက Windows မှာပါတဲ့ Calculator ကို မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ … သင်ကိုယ်တိုင် ရေးပြီး တွက်ချက်လို့ရပါတယ် …. တစ်ခုရှိတာက သူက Software ထွက်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး …. မိတ်ဆွေရေးလိုက်တာလေးကို Bat File နဲ့ Save လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် … ပြီးလျှင် အဲ Bat File လေးကို Run လိုက်ပါက Command Prompt ပွင့်လာပြီး မိတ်ဆွေတွက်ချက်ချင်တဲ့ ပုံစံကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါက တွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် …. လွယ်ကူပါတယ် … +, -, *, /(ပေါင်း၊ နှုတ်၊ မြှောက်၊ စား) တွေရပါတယ် …သိပြီးသားမိတ်ဆွေများအတွက်တော့ ဟာသလေးလိုဖြစ်နေမှာပါဗျာ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
title Calculator ** Htet Kyaw **
set /p math=What you calculate?
msg *Dana (43)’s BAT File.
(1) Notepad ကိုဖွင့်ပါ။
(2) အပေါ်မှ Code တွေကို Notepad ဖြင့် ရေးပါ။ အောက်မှ ပုံကိုကြည့်ပါ။
(3) File ==> Save ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်မှပုံကိုကြည့်ပါ။
(4) Save as Dialog Box ကျလာလျှင် မိမိသိမ်းလိုသော နေရာကိုရွေးပေးပါ … ကျွန်တော်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ Desktop ပေါ်မှာပဲ Save လုပ်ပါတယ်။
(5) File name တွင် မိမိနှစ်သက်သော Name ဖြင့် သိမ်းပါ။ တစ်ခုရှိတာက File name နောက်က extension က *.bat ဖြစ်ရပါမယ်။
(6) Save as type: မှာ All files ကိုရွေးပေးပါ …
(7) Save လုပ်နိုင်ပါပြီ …. အောက်မှပုံကိုကြည့်ပါ။
(8) Save လုပ်လိုက်သောအခါ Bat File Icon ပုံစံလေးပါ ….
ဒါကတော့ Windows7မှာပေါ်တဲ့ပုံပါ။
ဒါကတော့ Windows XP မှာပေါ်တဲ့ပုံပါ။
Posted by Htet Kyaw Khant's at 8:57 PM No comments:
Window Vista CD Key Finder
Windows Vista CDKey Finder တဲ့ … နာမည်ကအတိုင်းပဲ … သူက ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးကို Run လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့၊ မိတ်ဆွေတို့ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ … Computer Name , Windows Keys , … , etc … စတာတွေပေါ့ဗျာ … သူက ပြသပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ … ဒါလေးဘယ်လိုနေရာတွေအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ License Version သုံးတဲ့ သူရဲ့ စက်က CD Keys ကို သိချင်ရင် သုံးလိုက်ပေါ့ … ဟီးး …. တကယ်လုပ်နဲ့နော် … စတာ … ကဲပါ … သုံးချင်တဲ့နေရာသာသုံး … လိုအပ်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ … အဆင်ပြေပါစေ … ကျေးဇူးတင်ပါသည် …
[Download- Click here]
Posted by Htet Kyaw Khant's at 8:41 PM No comments:
Labels:့ hacking ဆိုင်ရာ
Webmail Hack တဲ့ဗျာ … နာမည်ကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ … တော်တော်များများလည်း စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ် … သူကတော့ ကြော်ငြာထားတာက အစ လန်ထွက်နေအောင်ကို ကြော်ငြာပေးထားတာပါ … သူပြောတဲ့ အတိုင်းလည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ … အနော်လုပ်ကြည့်တာတော့ … ထွက်ပါတယ် … ဘာတဲ့ (dolphin2) ဆိုလားပဲ … ဟီးး … ဘယ်အကောင့်ကို လုပ်လုပ် … ဒီပက်စ်ဝေါ့တစ်ခုထဲ ထွက်မှာပါ … မယုံလျှင် စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ … အဆင်ပြေပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါသည် … အထဲမှာ TXT File နဲ့ Product Key ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ …
[download= click here]
Posted by Htet Kyaw Khant's at 8:35 PM No comments:
Best hacking tools [85 in 1]
Hotmail Hacking, Yahoo Hacking, Msn Hacking & Fun Tools, Fake Screen Pages & Other Hacking Tools ပေါင်း များစွာ ပါဝင်တဲ့ Hacking Tools 85 ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ … အကုန်လုံး အလုပ်လုပ်တယ်လို့တော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်ပါဘူး … ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Hacking ကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့အတွက် မစမ်းရသေးတဲ့အတွက်ပါ … သိချင်သူများတော့ စမ်းသုံးကြပါ … တစ်ခုရှိတာက ဒီကောင်ကို Download ယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူ စက်မှာ တင်ထားတဲ့ Anti-Virus (or) Internet Security တစ်ခုခုကို Disable (or) Exit လုပ်ထားပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါသည်။
Posted by Htet Kyaw Khant's at 8:29 PM No comments: